Phonics for Young Learners (age6and above) – BSI Learning Academy
Home Phonics Phonics for Young Learners (age6and above)
Admin January 27, 2021 March 19, 2022 Phonics
🔹Phonics Section A (age6to 8)
Section A – 9:00 am to 10:30 am (Wednesday)
🔹Phonics Section B (age9to 13)
Section A – 9:00 am to10:30 am (Wednesday)
🔹Phonics Section C (age 14 and above)
Section A – 10:30 am to 12:00 pm (Wednesday)
Fees: 200,000 kyats per 12 weeks (12 sessions in total)
Class size – Maximum 12
We provide e-books (pdf) free of charge.
Duration varies based on the current level, pace of learning and expected level of competency of the learners.
Or cash can be deposited into the following YOMA (Flexi account)
YOMA (flexi account) number – 0089 4542 4000 190
For more information, please reach us at 09 504 3135 (or) 09 254 278 273.
“ကလေးတွေကို ဘာကြောင့် Phonics သင်ပေးသင့်သလဲ”
Phonics ကို လွယ်လွယ်ရှင်းရှင်း အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရရင်တော့ အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ တစ်လုံးချင်းစီကို ဘယ်လိုအသံထွက်ရတယ်၊ သူတို့အချင်းချင်း ပေါင်းစပ်တဲ့အခါ ဘယ်လိုအသံထွက်ရတယ်ဆိုတာကို ကလေးတွေ မျက်စိထဲ၊ နားထဲ ယဉ်ပါးလာအောင် သရုပ်ပြ၊ လေ့ကျင့်ပေးခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်စာကို ဘာသာစကားတစ်ခုအနေနဲ့ သင်ယူတဲ့အခါ မိခင်ဘာသာစကားဖြစ်တဲ့ မြန်မာဘာသာစကားရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကို အနည်းနဲ့အများ ခံကြရပါတယ်။ အထင်ရှားဆုံးဥပမာတစ်ခုကတော့ အင်္ဂလိပ်စာမှာအမြဲတွေ့ရတဲ့ “final consonant” လို့ခေါ်တဲ့ နောက်ဆုံးဗျည်းသံဟာ မြန်မာစကားမှာ ထည့်ပြောလေ့မရှိတဲ့အတွက် အချို့သော ကလေးတွေဟာ အင်္ဂလိပ်လိုပြောတဲ့အခါ နောက်ဆုံးအသံတွေပါအောင် ထွက်နိုင်ဖို့ တော်တော်လေးရုန်းကန်ရတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘယ်အက္ခရာကိုတွေ့တဲ့အခါ ဘယ်လိုအသံထွက်ရကြောင်း သူတို့သတိထားမိလာအောင်၊ သိလာသည်နဲ့အမျှ ပြောထွက်လာနိုင်အောင် ကျွန်မတို့ရဲ့ Online Phonics အတန်းတွေမှာ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပါတယ်။
Phonics ကိုသင်ကြားပေးခြင်းဟာ ကလေးတွေရဲ့ အသံထွက်နဲ့ အပြောစွမ်းရည်ကိုသာမက အရေး၊ အဖတ်မှာရော နားထောင်တဲ့အခါမှာပါ အကျိုးရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားမှာ အသံတွေကို ဘယ်လိုပေါင်းစပ်ထားကြောင်း တဖြည်းဖြည်းသိလာပြီဆိုရင် စာလုံးပေါင်းတွေမှတ်တဲ့အခါ ပိုမိုလွယ်ကူ၊ လျှင်မြန်လာမယ်။ ထိုသို့လွယ်ကူလာခြင်းဟာ ကလေးတွေရဲ့ အရေးစွမ်းရည်အတွက် အထောက်အကူရစေပါတယ်။ နားထောင်တဲ့အခါလည်း အသံအမှန်ကို သိနေတဲ့အတွက် နားလည်မှုစွမ်းရည် မြင့်မားလာနိုင်ပါတယ်။ ဖတ်တဲ့၊ ပြောတဲ့အခါမှာလည်း အသံထွက်မှန်ကန်တဲ့အခါ သူတစ်ပါးနဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုဖို့ ဖြစ်လာပြီဆိုရင် မိမိကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့မိမိလိုရာကို ထိထိရောက်ရောက် ပြောရဲဆိုရဲလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Blue Sky International ရဲ့ Phonics အတန်းတွေမှာ Oxford University ကထုတ်တဲ့ Oxford Phonics World Course ကိုအခြေခံပြီးသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အတန်းတွေကို‌တော့ level လိုက်မဟုတ်ဘဲ အသက်အလိုက်ခွဲထားပါတယ်။
Oxford Phonics World မှာ Book (1) to Book (5) အထိရှိပြီး ကလေးတွေအသံမှန်မှန်ထွက်တတ်ဖို့ရာ စာအုပ် (၅) အုပ်လုံး စနစ်တကျ လေ့လာလေ့ကျင့်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် စာအုပ်တစ်အုပ်ကို level တစ်ခုလို့ မသတ်မှတ်ပဲ အားလုံးကို စုံစုံလင်လင် သင်ကြားပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အသက်အုပ်စုခွဲထားတာကတော့ နှေးနှေးသွားဖို့လိုတဲ့ကလေး‌ရယ်၊ မြန်မြန်သွားချင်တဲ့ ကလေးရယ်ဆိုပြီးရှိတဲ့အတွက် သူတို့နဲ့ သင့်တော်တဲ့အုပ်စုလေးမှာ သင်ယူနိုင်အောင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Phonics အတန်းတွေဟာအသံကို အဓိကထားသင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ကလေးတွေရဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှု level အပေါ်မူတည်ပြီး သူတို့နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ Listening တွေ၊ speaking တွေကိုပါ ထည့်သင် လေ့ကျင့်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Phonics အတန်းတွေကို ဘယ်နှစ်လအပြတ်ရယ်လို့ သတ်မှတ်ထားတာမရှိပါဘူး။ တစ်ပတ်ကို (၁) ရက်၊ တစ်လကို (၄) ချိန်နှုန်းနဲ့ သင်ကြားပေးသွားမှာပါ။
Oxford Phonics World Book (1) to Book (5) ကိုအခြေခံပြီး ကလေးတွေနဲ့ သင့်တော်တဲ့ activity တွေနဲ့ တွဲဖက်ပြီး လေ့ကျင့်‌သင်ကြားပေးသွားပါမယ်။ မိမိစိတ်ကျေနပ်တဲ့အသံလေးတွေ ထွက်နိုင်တဲ့အထိ ဆက်လက်တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
Learn about our other online classes in the links:
Applied English Grammar classes
ဖော်ပြပါ online အတန်းများကို နယူးဇီလန်နိုင်ငံ အိုးတဂိုတက္ကသိုလ်မှာ ပါရဂူဘွဲ့ စာတမ်းရေးသားပြုစုနေသူ၊သုတေသီလုပ်ခဲ့စဉ်က အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊ အောက်စ်ဖို့ဒ် တက္ကသိုလ်တွင်ပြုလုပ်သော နိုင်ငံတကာသုတေသီများစာတမ်းဖတ်ပွဲ၊ ဆွေးနွေးပွဲတွင် ဝင်ရောက်ပါဝင် တင်ပြဖို့ ဖိတ်ကြားခံခဲ့ရသူ၊ ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်တက်စဉ်တက္ကသိုလ်ပေါင်းစုံ စာစီစာကုံးပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးအဆင့် ဒုတိယဆု ဆွတ်ခူးခဲ့သူ၊ အင်္ဂလိပ်စာ၊ဘာသာစကား သင်ကြားရေး အတွေ့အကြုံ (၁၄) နှစ်ကျော်ရှိသူ ဆရာမ ဒေါ်လှဝင်းမေဦး ဦးစီးပြီး စိတ်ရှည် ကြင်နာတတ်သော အရည်အချင်းရှိသော ဆရာမများက သင်ကြားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Our online classes and individual coaching sessions are organised by Teacher Wendy @ Hla Win May Oo, along withagroup of well-trained, patient, kind and well-qualified teaching associates.
Lead Teacher: Ms Hla Win May Oo @ Wendy
We have proven records of success in coaching for the Cambridge English and IELTS courses over 14 years. Our candidate has achieved up to an overall score of 8.5 in IELTS!
#Starters #Movers #Flyers